Madasha – IFIYE
Taariikh Nololeedkii Faaduma Qaasim Hilowle !!
7-dii October sannadkii 1949-kii ayeey ku dhalatay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir; Fanka ayeey kusoo biirtay iyadoo caruur ah, waxaana dhallay waddani wayn AUN oo kamid ahaa horseedkii ururkii SYL, waana Qaasim Hilowle oo lagu naaneysi jiray Qaasim “Iskiifo”. Aqalkaas fanka iyo waddaniyadda leh ayeey ku dhex barbaartay Faaduma Qaasim, ilaa ugu dambeyntii ay noqotay […]
Maxaa iiga baxay dood cilmiyeedkii xalay iyo madashii Ifiye?
“Dib maxaa idiin celinayoo hore idiin diiday, maruun maad ku dayataan khalqiga libinta doonaaya?.”  Xalay oo magaalada Muqdisho lagu qabtay madal ay dhalinyaradu u kala herin misna ilyartu is qabatay , oo ay soo qabanqaabisay xarunta Ifiye ayaa dulucda ugu weyn ee daarnayd aheyd dood cilmiyeed lagu falanqeeyay “DOORKA DHALINYARADA EE DIB U DHISKA […]